NLD လွှတ်တော် တက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားကြောင်း ဘန်ကီမွန်း ပြောဆို
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ ပါတီ၊ ကျောင်းသား၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့များတွေ့ဆုံ
ကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ဘန်ကီးမွန်း တိုက်တွန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေ့ဆုံမှု ကုလ ကြိုဆို
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာအရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့ ဆွေးနွေး
အားနည်းတဲ့ဘာသာတွေကိုဗိုလ်ကျခြင်းလို့ မြင်ပါတယ်။ လူနည်းစုဘာသာတွေကိုလေးစားဖို့လည်း OIC ကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပြောကြားေးစေချင်ပါတယ်။ မိမိဘာသာဝင်တွေကိုလည်း OIC အနေဖြင့်တာဝန်ခံစေချင်ပါတယ်။
Oct 01, 2012 04:19 PM
Yes Mr. G. Secretary,
You're right. Until today OIC activated ,created and encouragedalot of Violent and Invading. Seconds persons were lostalot of land, properties,security, happiness, families members, livelihood, personality, Unities, and so on both of mentality and physical. OIC cheer , encourage, support anything by money, power ,weapons and human power and mentality to their supporters without sympathy, and situation of other hands. Please UN and world stop the OIC's probs to be returned peace.
OIC အနေနဲ့ ဘာသာရေးကိုဘက်လိုက်ပြီးတော့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ)တွေကို ကူညီနေမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘာသာရေးဘက်လိုက်ပြီးတော့ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကူညီနေမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကျေနပ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး အေဒီလို့သာ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရာလည်းရောက်ပါတယ် OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံကြီးသားတွေမဟုတ်ပေးနဲ့ လူယုတ်မာတွေလို့ တခြားနိုင်ငံတွေက မြင်သွားနိုင်ပါတယ် လို့သာမြင်ပါတယ်။
Sep 30, 2012 07:41 AM
They will reap as they sow!